Nezvedu - Hebei Med Siti Mishonga Co, Ltd.
Shamwari ina dzakamisikidza Hebei Med Site mishonga Co, Ltd. muna 2005 nekuda kwekugadziridzwa kwekambani yekare. Izvo zvakanaka zviwanikwa zvekutengeserana kwekunze uye nyanzvi timu nguva dzose yedu yakasimba mukana. Munguva pfupi, isu takanyoresa mimwe mishonga nezvimwe zvekushandisa pakurapa munyika dzakati wandei uye tave nekutengesa kwakagadzikana. Izvi zvinosimbisa kugona kwedu kuvhura misika yakawanda uye kuyedza nzvimbo itsva dzebhizinesi.
Iye zvino tine zvikwata zvakanaka zveKupindura zvigadzirwa (okisijeni inosangana nazvo, inodhira mvura mumhepo, inochengeterwa zvigadzirwa, . Tsigiro, zvigaro zvevhiri, mabweki, tsvimbo, nezvimwewo).
Dunaliella salina ndiye zvigadzirwa zvegoridhe kune vanhu vane hutano mazuva ano, sekuumbwa kwawo kunoenderana nehuwandu hwezvinhu zviri mumuviri wemuviri uye cell plasma, uye inogona kutamisa maseru nekugadzirisa dambudziko rekushungurudzika kwesero. Vazhinji vanhu vazhinji pasi rese vanoishandisa uye vanoibata seyokutanga ine hutano kuchengetedza zvigadzirwa.
Wedu mukuru mubatsiri-Inner Mongolia Lantai Industrial co., Ltd inozivikanwa nehupfumi hwayo hwepanyama uye hwepamusoro hwakachena dunaliella munyika. Iine tekinoroji yepamusoro yekugadzira, zvigadzirwa zvedu zveDunaliella salina zvinokwezva vatengi vakawanda.
2019-nCoV inokanganisa hupenyu hwedu kubva muna Ndira 2020, Kudzivirira kupfeka kubva fekitori yedu kwave kuchishandiswa muWuhan uye kuita basa rakakosha ipapo. Iye zvino makiti ekukurumidza ekuedza, masiki ekuchinjisa ekuchenesa, masks ekuvhiya, magirazi ekudzivirira, kupfeka kwekudzivirira, magurovhosi ...... anotumirwa nekukurumidza kune dzimwe nyika nekukurumidza kwedu sppeed.
"Hupenyu kutanga, Shandira pekutanga, Shanda zvakanaka, Hupenyu hunakidze" ndiko kutsvaga kwedu.
Sarudza pano, uye gutisa pano ......